Vinylalkohol sagxadda dhulka, Wpc vinylalkohol sagxadda dhulka, SPC sagxadda dhulka, PCV Gogosha - Lingdian
Gogosha vinylalkohol, sagxadda dhulka vinylalkohol wpc iyo sagxadda dhulka SPC
Ma waxa aad u doonayay? Sidee ku saabsan ...
Floor vinylalkohol Guji Taxanaha System
daaha 4.Base la Maro adag
Taxanaha Floor vinylalkohol WPC
Iyadoo our waayo-aragnimo baaxad warshadaha iyo tababarayaasha la aqoonsan yahay oo la hubiyo xaaladaada, shaqaalaha fursad ay ku wanaagsan bartaan halka helo xirfado wax ku ool ah loo baahan yahay si ay u dareemaan raaxo leh ku abuurey wax ka heli doono.
12068 SAGXADA SPC
SPC SAGXADA 643-0
SPC SAGXADA 602-10
SPC SAGXADA 232-03
Shirkadda Changzhou Lingdian Wood ayaa waxaa la aasaasay sanadkii 2003. aagga geedka waa 80,000 oo mitir oo laba jibbaaran. Waxaan nahay shirkad keentay berrinkii Gogosha vinylalkohol, wpc Gogosha vinylalkohol iyo sagxadda dhulka SPC ee Shiinaha. Waayo, dhulka vinylalkohol, our awoodda waa in ka badan 150 weelasha bil kasta; Waayo, dhulka vinylalkohol wpc. Our awoodda waa in ka badan 150 weelasha bil kasta; Waayo, dhulka SPC, Our awoodda waa in ka badan 50 weelasha bil kasta.